Uma kukhona labo abangazi ukuthi yiziphi izindawo eziyingozi, sinikeza umbhalo. Izindawo zokudoba ziyizindawo ezithile zezinambuzane nezikhumba, okuthinta kuwo amaphuzu athile kubangela isifiso sobulili okwandisiwe. Ukuqapha okukhethekile kufanele kuhokhwe kumbono "ngezikhathi ezithile", ngoba hhayi ngaso sonke isikhathi ukuthinta izinkomba ezihamba phambili eziholela ekufuneni okufunayo, ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi umphumela awuyona into emnandi kakhulu.
Izigaba ezingokoqobo zikhona ngabanye, kodwa kunezivumelwano eziningi ngezindlela eziningi. Ngamanye amazwi, izindawo eziningi eziyingozi ziyi-earbe, ulimi, izindebe, izinkophe, inkohlakalo, isikhumba ohlangothini lwangaphakathi lwesihenqo, i-occiput, isifuba, izinsipho, izintambo, izithende, indawo ezungeze izitho zobulili futhi empeleni izitho zobulili.
Kulula nje, uhlu lwezindawo ezihlukumezayo lungabandakanya noma iyiphi ingxenye yomzimba, okuthinta ukuthi kubangelwa yini ukuvusa ucansi. Okukhulunywa kakhulu kakhulu, futhi kusukela kulokhu indawo eyaziwa kakhulu eyaziwa ngokuthi yi-female geogenous zone yilapho okuthiwa iphuzu G. Ukwazi ngalesi simangaliso esiyingozi, kunomunye "kodwa", izifo eziningi ze-physiologists namanje aziqiniseki ngokukhona kwephuzu G. Ukungakholelwa kwezazi ze-physiologists kuphikisa lokho okuthiwa. "Izenzo" ezithi zifeze izingxenye ezihamba phambili ze-U, A no-P, kuyiqiniso, mayelana nokuba khona kwalezi zindawo, akubona wonke umuntu owaziyo.
Kusukela endaweni yokubuka, indawo evulekile, ebizwa ngokuthi i-P, iyindawo ephakathi kwe-anus ne-vagin.
Indlela yokuthola: Ungayitholi leli sayithi kunzima ngokwanele. Ukuze ufike kule ndawo ngempela ngaphandle kwamakhono we-acrobatic, ukuze uthintane kuyisiqeshana esincane sesikhumba esithandekayo.
Kodwa uma kwenzeka ngokuzumayo ukuthi usesho lwe-P - zone liyehla, noma indawo ehlukumezayo itholakala ukuthi ibuzwe ngokufinyeleleka kwayo kulolu hlu oluthile, cela usizo kumuntu othandekayo, noma kangcono kodwa ulisebenzise njengesizo esibukwayo. Iqiniso liwukuthi le ndawo ayitholakali kuphela kwintombazane, kodwa futhi emzimbeni wesilisa, itholakale cishe endaweni efanayo, phakathi komgodi wokulinganisa kanye ne-imoshka, futhi inomphumela ofanayo othakazelisayo nokwelashwa okunekhono, ngakho uhlanganise okuwusizo nomnandi.
Indlela yokusebenza: umphumela omkhulu uvumela ukuthi ufeze inhlangano yokudonsa kule ndawo. Yebo. kudingekile ukukhiqiza okunye okuhlukile kwamandla, amaphiko eminwe noma ulimi.
Khumbula: ukugqugquzela indawo ye-P kungasiza ukufeza i-orgasm esheshayo ehambisana nezinzwa ezicacile.
Le ndawo ehlukumezayo ikhona engxenyeni yangaphakathi yesifazane, ephakeme kakhulu kune-cervix.
Indlela yokuthola: lapha usesho ngeke lube lula, kunzima kakhulu ukuthi ngeke kuphumelele okokuqala. Awukwazi ukusizakala ngomkhandlu olandelayo, uqhubeke nokuzikhethela kwendawo yale ndawo ehlukumezayo, awukwazi ukuwuthatha "ngaphandle" uma ngabe lona wesifazane enenhlanhla nomlingani kakhulu kangangokuthi unezandla ezithinteka kakhulu, ezibucayi ezinomunwe omude, njengempiyano noma umlingo. Kodwa-ke, uma umuntu ovamile ephikisana, ngezandla ezivamile unomqondo wokusebenzisa izindlela ezingalungile ngesimo se-vibrator ekhethekile, kumele abe mncane ngokwanele, eside, eboshwe ikhanda ekupheleni.
Indlela yokuqhubeka: ukugqugquzela le ndawo, udinga ukucindezela okufanayo, amandla nokuqina okuzokwenza umzweli abe nomuzwa.
Gcina engqondweni: uma uthola le ndawo engaqondakali, ungakhohlwa ngezinkinga zokugcoba, uma kunjalo, ngoba Kubonakala ukuthi ukugqugquzelwa kwe-A-zone kuhambisane nemfihlo eminingi. Ngaphezu kwalokho, uma, isibonelo, i-clitoris izwela kakhulu emva kokufinyelela kwe-orgasm, le ndawo izosiza ukukhulisa injabulo, ngoba uzobe ezwela ngaphambi nangemva kokufika kokuphakama kokwaneliseka ngokobulili.
Le ndawo ehlukumezayo iseduze nokuvulwa komsele.
Indlela yokubona: ungacela kuphela, kodwa uma umlingani wakho efuna izindlela ezilula, unike isipho, i-urethra isendaweni yesifazane noma amaminithi ambalwa ngaphansi kwe-clitoris.
Indlela yokuqhubeka: lapha ungenza ngaphandle kwamakhono akhethekile ngaphandle kwamadivaysi engeziwe, uhlanzekile kakhulu, futhi ngokuhlelekayo, izandla noma ulimi olufanele. Ukugqugquzela le ndawo kungcono hhayi i-nadavlivaniyami eqinile kakhulu ngoba uma kungenjalo kuzoletha ukungathandeki kunokuba injabulo.
AmaMedical mayelana nobulili ngesikhathi sokukhulelwa
Amageyimu wezinsuku ezithandwayo zothando
Isikhwama sokuheha imali
I-Trophic ulcer yokuphathwa komlenze ophansi wemithi yabantu
I-Capercailles nobisi lwe-caramel no-ukhilimu
UDisemba omuhle: imikhiqizo emisha yokunakekelwa komzimba evela e-L'Occitane nasePrince Herme
Kungani sidinga i-magnesium emzimbeni?
Kungani indoda ingaba nezindebe eziluhlaza okwesibhakabhaka?
Ukuthembela ekuthengeni: isifiso sokuthenga
Ukuhlukaniswa ngoKhisimusi: izindlela nokuchazwa
Ukunakekelwa kwebusika isikhumba sobuso
Indlela yokuphumelela emsebenzini?
Indlela yokugcina isikhumba sesebusha isikhathi eside
Ulungele ukugcwaliswa okulandelayo emndenini?
I-Pepper egcwele ishizi neqanda